के तपाईको पेट पुट्ट निस्किएको छ ? लसुनको प्रयोगबाट यसरी घटाउनुहोस |
गृह पृष्‍ठ खबर के तपाईको पेट पुट्ट निस्किएको छ ? लसुनको प्रयोगबाट यसरी घटाउनुहोस
के तपाईको पेट पुट्ट निस्किएको छ ? लसुनको प्रयोगबाट यसरी घटाउनुहोस
प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन १८ , आईतवार २०:१३
ई साझा कुरा, असोज १८
यसरी परम्परागत घरेलु औषधिको रुपमा तथा आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको लसुनमा औषधिय गुण हुन्छ भन्ने कुरा एलोप्याथिक विशेषज्ञहरु पनि मान्दछन्। यसै कारणले गर्दा चिकित्सकहरुले विरामीलाई सन्तुलित भोजनको बारेमा सल्लाह दिँदा खानामा लसनुको प्रयोग फाइदाजनक हुने सल्लाह समेत दिन्छन् ।
विहान खाली पेटमा एक केस्रा लसुन खाँदा फाइदै–फाइदा
हाम्रो भान्सामा मसलाको रुपमा दैनिक प्रयोग गरिने लसुन स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायी मानिन्छ । साथै खाली पेट लसुन खानुको अन्य धेरै फाइदाहरु पनि छन् । हरेक दिन एक केस्रा लसुन सेवन गर्नु अमृतसमान हुने भनाइ छ ।
बिहान खाली पेटमा लसुनको सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । लसुनमा भिटामिन र मिनरल्सयुक्त पोषक पदार्थ भरपुर मात्रामा पाइन्छन् । विशेषगरी लसुनमा भटामिन बी १, बी–६, सी, म्यागजिन, क्याल्सियम र कपर पाइन्छ । दैनिक लसुन सेवन गर्दा दिनभरका लागि शरीर सुरक्षित रहन्छ । यसक साथै एनर्जी पनि मिल्छ ।
लसुन कसरी–कुन समयमा खाने
सम्भव भएसम्म लसुन विहानै खाली पेटमा खानुपर्छ । लसुनलाई काँचो खानु बढी प्रभावकारी हुन्छ । किनभने पकाइएको लसुनमा औषधीय गुण एकदमै कम हुन्छ । यसको प्राकृतिक एन्टिबायोटिक गुण प्राप्त गर्नका लागि खाली पेट सेवन गर्नुपर्छ ।
कोलोस्ट्रोल घटाउनदेखि उच्च रक्तचार रोक्नसम्म आर्युवेदमा लसुनलाई जवान रहने औषधि मानिन्छ । साथै यसले केही रोग जस्तै पायल्स, कब्जियत, कानको दुखाई, उच्च रक्तचाप, अरुचीमा यो उपयोगी हुन्छ । लसुन एक महत्वपूर्ण एन्टिवायोटिक पनि हो ।
यस्ता छन् नियमित लसुन सेवनका फाइदाहरु
– लसुनले रक्त नलीलाई चौडा बनाइदिन्छ । जसको कारण रक्त प्रवाह सजिलो हुन्छ । जसलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ, उनीहरुले खाली पेट काँचो लसुन सेवन गर्नुपर्छ ।
– लसुनको स्वादमा रुची छैन भने लसुन सेवन गरिसकेपछि एक गिलास दुध सेवन गर्नुपर्छ । चिकित्सकको परामर्श अनुसार लसुनको सप्लिमेन्ट पनि लिन सकिन्छ । हृदयलाई स्वस्थ्य राख्न हृदयलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि लसुन एकदमै उपयोगी हुन्छ ।
– रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन लसुनमा भिटामिन सी, बी–६, म्यानिज र सेलेनियम हुन्छ । यी सबै तत्वले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । लसुनमा रहने एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टिमाइक्रोवियल गुणले शरीरमा रोग लाग्न दिदैन ।
– फंगल इन्फेक्सनको विरुद्ध लसुनमा शक्तिशाली एन्टिफंगल गुण हुन्छ । यसले दाद, चिलाउने लगायतका रोगसँग लड्ने क्षमता राख्छ ।
पछील्लो पोस्ट वाणगंगामा पुनः रेडियो कक्षा संचालन हुँदै
अगिल्लो पोस्ट पिँडालु खादा यस्ता छन फाईदा, हेर्नुहोस्
बजेट प्रतिस्थापन विधेयक : शिक्षकको उपचारका लागि शिक्षक अस्पताल स्थापना गरिने